Khabar Nirantar | » हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा मन र मुटु छैन हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा मन र मुटु छैन – Khabar Nirantar
हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा मन र मुटु छैन
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर १३ दिनदेखि घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेको छु। ९ औं / १० औं दिनमा ज्वरो खोकीलगायतका लक्षणसमेत देखिएकाले चिकित्सकहरुले केही दिन हेर्ने र त्यसपछि मात्रै अर्को परीक्षण गर्ने भन्नुभएको छ। कोरोनाको अर्को परीक्षण कुरिरहेको छु।
फागुन २३ मा संसदमा छलफल हुँदै गर्दा सामुदायिक आइसोलेसनको कुरा हामीले उठाएका थियौं। सामुदायिक आइसोलेसन भयो भने अस्पताल जान नपर्ने तर अरुलाई संक्रमण नसरोस् भन्नका लागि आइसोलेट भएर बस्न सजिलो हुन्छ भनेर नै उक्त कुरामा छलफल गर्‍यौं। संसदमा मात्रै होइन,प्रधानमन्त्री र मेयरहरुलाई भेटेर पनि भन्यौं। त्यो बेलाको समय मैले स्मरण गरिरहेको छु। अस्पताल अहिले त जान परेको छैन। यदि जानै पर्ने भयो भने अस्पतालमा एउटा पनि बेड नभएको मलाई राम्रोसँग जानकारी छ।
प्रत्येक दिन काठमाडौं ४ का निर्वाचन क्षेत्रका साथै उपत्यकाबाहिरका अनेकन व्यक्तिसँग टेलिफोनमा कुरा गरिरहेको छु। कतिपयलाई बेड मिलाउन कोसिस गरिरहेको छु। तर, एक्लो प्रयासको त्यति अर्थ रहँदैन। हामीलाई चाहिएको सिस्टम हो। सिस्टम सजिलोसँग बनाउन सकिने थियो। फागुनमै संसदमा छलफल गर्दैगर्दा कसरी काठमाडौंमा एउटा डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने कुरा उठाइएको थियो। निजी अस्पतालबाट सहयोग लिन सकिने थियो। स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मन्त्रालयमै भेटेर अक्सिजन प्लान्ट बनाउनेबारे सुझाव दिइएको थियो। सिस्टम कसरी बनाउने बारे पटक/पटक लेखेर, भनेर, संसद र बाहिर सुझाव दियौं। मैले मात्रै भनिरहेको थिइन। अरु थुप्रैले सल्लाह दिइरहनुभएको थियो।
हामीले उठाएका कुराहरु किन नसुनिएको होला? किन नगरिएको होला? यिनै कुराहरुले मन पोलिरहेको छ। मेरो परिवार सुरक्षित रहेर मात्रै हुँदैन। मेरो परिवार संक्रमणबाट मुक्त भएर मात्रै हुँदैन। मेरो दायित्व र कर्तव्य निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकप्रति मात्रै होइन। सबै नागरिकप्रति मेरो जिम्मेवारी छ। मेरो जिम्मेवारी सबैप्रति छ भने सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्ने होइन? सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिएको प्रधानमन्त्रीलाई पोल्नुपर्ने होइन? प्रधानमन्त्रीलाई अहिले दुख्नुपर्ने होइन? तर, प्रधानमन्त्रीलाई पोलिरहेको छ त?
अघिल्लो समयका कुरा नगरौं। संक्रमित भएर १२/१३ दिन देखि घरमा बसिरहँदा सेनापतिका रुपमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के–के गर्नुभयो त? यहीबीचमा उहाँले के–के गरिरहनु छ भनि पछ्याउने कोसिस गरें। कोरोनाका कारण प्रभावित भएको एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्र छ। त्यहाँभित्र पनि नन-कोभिड। संक्रमण नभएको तर अन्य रोगको उपचार नपाएर अस्तव्यस्त भएको छ। अर्कोतिर, आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ। हजारौं मान्छेहरु बेरोजगार भएका छन्। स्वरोजगार भएका व्यक्तिको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। कंगाल बनेका छन्,सडकमा आइपुगेका छन्। यस्तो बेलामा यी कुनै पनि कुरामा प्रधानमन्त्रीले यी १२/१३ दिनमा ध्यान दिएको पाइएन।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता प्रचण्डसँगको भेटघाटमा छ।पार्टीभित्रको झगडा, लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा आफ्नै दलका दुई नेता मिलाउने प्राथमिकता छ। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको प्राथमिकता कर्णालीको झगडा मिलाउने छ। त्यसपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले एकथरि नेताहरु रिसाउने भएपछि फकाउने र ढाल्नेभन्दा ध्यान छैन। जनतालाई पोलेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीलाई छोएकै छैन। अब हामीले भन्नु नै पर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मुटु छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग मन छैन। प्रधानमन्त्रीसँग मुटु नै रहेनछ। यतिका कुरा हुँदै गर्दा दुख्दा पनि नदुख्ने,पोल्दा पनि नपोल्ने। छुँदा पनि नछुने भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग मुटु छैन। प्रधानमन्त्रीको ताल यस्तो छ।
अर्कोतर्फ स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बेताल छ। यसैबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णय हेरें। निर्णयमा सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने भनिएको छ। गरिब गुरुवा उपचारका लागि काठमाडौं उपचार गर्न आउँछन्,उनीहरु कहाँ गएर उपचार गर्ने? उनीहरुले उपचार कहाँ गर्ने? काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाल मेडिकल, किस्ट मेडिकल कलेज छन्। मेडिकल कलेजहरुलाई लिन सकिन्छ। तिनिहरुमा सयौं बेड छन्। २५ सयदेखि तीन हजार बेड क्षमताको कोभिड अस्पताल बनाउन सकिन्छ। एउटा रोष्टर बनाएर गर्‍यो भने त्यहाँभित्र क्रिटीकल केसहरु हेर्न पनि सकिन्छ। त्योभन्दा बाहिर गर्ने कार्य काठमाडौंमा १५ हजार क्षमतासम्मको आइसोलेसन बनाउन सकिन्छ।
सिस्टमको विकास गर्ने हो। काठमाडौंभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा पनि यस्तै नै हो। स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय गरेर प्रभावकारी प्रणाली बनाउन सकिन्छ। सरकारले सिस्टमको कुरा नगरेर लहडमा निर्णय गर्दै आएको छ। आज निर्णय गर्ने तर २/३ महिनाको परिस्थितिको आँकलन पनि गरिएको हुँदैन। सरकारका कदम खाली ‘रियाक्ट’मात्रै छन्। कसैले सुझाव दिएको छ भने नानाभाँती गाली गर्ने सरकारी प्रवृत्ति छ। अनि, गलत कुरा गरेर ढाकछोप गरिँदै आइएको छ। पहिले केही पनि थिएन, अहिले चमत्कार गर्‍यौं भनि ढाकछोपको प्रयत्न भएको छ। सरकारी प्रवृत्तिले गर्न सकिने काम पनि गर्न सकिरहेका छैनौं।
समय त धेरै घर्किएको छ। तर, गर्न सकिने समय अहिले पनि छ। स्रोत र साधन हामीसँग छ। सबै नागरिक यो बेला सरकारलाई मद्धत गर्न चाहिरहेका छन्। कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कदम असफल होस् भन्ने को चाहन्छ? हामी सबै मान्छे हौं नि। सरकारको सफलतासँग प्रत्येका परिवार जोडिएको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रहले हेरिए पनि यो बेला कोभिड नियन्त्रणमा सरकार सफल होस् नै भन्ने सबैको चाहना हुन्छ। कोभिड रेस्पोन्स ठीक ढंगले गरोस् भन्ने सबै नागरिक चाहन्छन्। गर्नुपर्ने कार्य नगरिरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ नगर्नुपर्ने कार्य सरकारले गरिरहेको देखिन्छ।
नागरिकका पनि कर्तव्य छन्। सरकारले एक्लै गर्न सक्ने पनि होइन। अगाडिका दिनहरु अझै अप्ठ्यारो देखिरहेको छु। अत्याउन खोजेको होइन,सर्तक रहन आवश्यक छ। सचेत रहँदारहँदै पनि कतिपय सन्दर्भमा पनि चुकें। सक्रिय हुँदै गर्दा पनि सर्तकतासहित रहौं। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नैपर्छ। म पनि संक्रमित भएर निस्केपछि थप सचेत भएर दैनिक क्रियाकलाप गर्ने सोचिरहेको छु। लागू गर्न सामान्य लाग्ने तर गर्नैपर्ने मास्कको प्रयोग तथा सामाजिक दूरी अनिवार्य पालना गरौं। सानो ध्यान दिदाँ आफूसहित परिवारलाई जोगाउँछौं। परिवारलाई जोगाउने भनेको समुदायलाई जोगाउने हो। आफ्ना परिवारका अग्रजलाई यसपटक बचाउन सक्यौं भने दसैं-तिहार फेरि पनि मनाउन सक्छौं। आशीर्वाद लिन सक्छौं। तसर्थ सक्रिय रहौं, तर सर्तकतासहित।